सरकार र प्रतिपक्षलाई असफल बनाउन पर्दा पछाडिबाट षड्यन्त्र भएकै हाे?, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
सरकार र प्रतिपक्षलाई असफल बनाउन पर्दा पछाडिबाट षड्यन्त्र भएकै हाे?
डिसी नेपाल , १६ कार्तिक २०७५
वर्तमान सरकारको मुख्य लक्ष्य भनेको सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल हो। यो नारालाई सार्थक बनाउन इच्छशक्तिका साथै आर्थिक रुपमा पनि मजबुत हुन आवश्यक छ। तर पछिल्लो समय मुलुकमा बैदेशिक लगानी निकै कम हुँदै गइरहेको तथ्य सार्वजनिक हुन थालेका छन्। विदेशी सहयोग र लगानी कम हुने सरकारसँग बचत थुप्रिएर बस्ने अवस्थाले मुलुकलाई समृद्ध बनाउन सक्दैन।
मुलुकमा दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकार गठन भएर राजनीतिक स्थिरता हुन थालेको अहिलेको अवस्थामा किन वैदेशिक लगानी र सहायता आउन कम भयो? यो निकै गम्भीर प्रश्न हो। किनभने नेपालजस्तो अल्पविकसित मुलुकमा वैदेशिक सहयोग प्राप्त भएन भने अर्थतन्त्र चलायनमान हुन सक्दैन। विकास परियोजनाका काम अगाडि बढ्न सक्दैनन् र मुलुकले आर्थिक विकास गर्न सक्दैन।
यसअघिको वैदेशिका लगानीको अवस्था हेर्दा मुलुकमा स्थिरता देखिएको बेला वैदेशिक लगानी बढ्थ्यो। लगानीको सुरक्षा नहुने अवस्था देखिएमा लगानीको परिमाण कम हुँदै जान्थ्यो। पहिलेको अवस्थालाई हेर्दा अहिले वैदेशिक लगानी बढ्नुपर्ने हो। किनकि अहिले तत्काल सरकार परिवर्तन हुने र सरकारको नीति परिवर्तन हुने अवस्था छैन। तर, यस्तो अवस्थामा पनि लगानी किन बढ्न सकेन? यो निकै गम्भीर विषय हो।
शक्तिशाली सरकार गठन भएको बेला पनि वैदेशिक लगानी र सहायता आउन सकेन भने यो सरकारमाथि नै प्रश्च चिन्ह खडा हुन्छ, कतै सरकार दिशाहीन र गन्तव्यहीत अवस्थामा पुगेको त होइन?
विदेशी लगानीकर्ताहरु सरकारको वैदेशिक लगानीसम्बन्धी नीतिका आधारमा लगानी गर्न आकर्षित हुन्छन् । उनीहरुका लागि सबैभन्दा ठूलो जोखिम भनेको सरकारको नीति परिवर्तन हुनु हो किनकि लगानी गरिसकेपछि सरकारको नीति बदलियो र नयाँ नीति लगानीकर्ताको अनुकूल भएन भने लगानीकर्तालाई ठूलो समस्या हुन्छ।
विगतमा नेपालमा स्थिर सरकार नहुँदा यही समस्या थियो र धेरै विदेशी लगानीकर्ताहरु आकर्षित हुन सकिरहेका थिएनन्। उनीहरुलाई डर थियो तत्कालै सरकार फेरिएर नीति फेरियो भने लगानी डुब्छ । तर, अहिले अवस्था त्यस्तो छैन । सरकार ५ वर्षको लागि लगभग नढल्नेगरी मजबुत दुई तिहाइको जगमा उभिएको छ । यति हुँदाहुँदै पनि विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित नहुनु भनेको सरकारले उनीहरुलाई आकर्षित गर्न र विश्वास दिलाउन नसक्नु हो ।
शक्तिशाली सरकार गठन भएको बेला पनि वैदेशिक लगानी र सहायता आउन सकेन भने यो सरकारमाथि नै प्रश्च चिन्ह खडा हुन्छ, कतै सरकार दिशाहीन र गन्तव्यहीत अवस्थामा पुगेको त होइन? सरकारले बाटो बिरायो वा गलत काम गर्यो भने त्यसलाई सच्याउन दबाव दिने प्रमुख प्रतिपक्ष पनि यो मुलुकमा नभएको जस्तो अहिलेको अवस्था देखियो।
अहिले एक प्रकारले सरकारप्रति जनताको वितृष्णा सुरु भएको छ। निर्वाचन अघि जनतासमक्ष गरिएको वाचा र प्रतिबद्धता पूरा भएका छैनन वा पूरा हुने दिशामा पनि छैनन्। वर्तमान सरकारबाट जनताले ठूलो अपेक्षा, आशा र भरोसा गरेका छन्, तर त्यो पूरा हुने छाँट नदेखिएपछि जनतामा वितृष्णा सुरु भएको छ।
लेखक: जगदीश दाहाल
अहिले जनताका प्रतिनिधि केन्द्रमा मात्र नभएर प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि भएका कारण उनीहरुले आफैंले केही गर्न जमर्को गर्ने तर केन्द्रले चाँही केही गर्न नसक्ने अवस्था कायम भयो भने जनताले विद्रोह गर्ने कुरालाई नकार्न सकिँदैन। यत्रो शक्तिशाली सरकारले पनि केही गर्न नसके कसले गर्न सक्छ वा सरकारले किन काम गर्न सकिरहेको छैन भन्ने अहिलेको मुख्य प्रश्न हो।
अर्कोतर्फ मुलुकमा दिनानुदिन बलात्कारका घटना बढिरहेका छन्। त्यसमा पनि विशेष गरेर सीमावर्ती क्षेत्र र शहरी क्षेत्रमा बलात्कारका घटना बढ्नुले कहीँकतैबाट यो दुई तिहाइको सरकारलाई अलमल्याउने, कमजोर र निष्तेज पार्ने अनि यो व्यवस्था नै कोल्याप्स गराउने षड्यन्त्र अन्तर्गत यो घटना घटाइएको त होइन भन्ने जिज्ञासा बढ्न थालेको छ।
सीमावर्ती क्षेत्र र शहरी क्षेत्रमा बलात्कारका घटना बढ्नुले कहीँकतैबाट यो दुई तिहाइको सरकारलाई अलमल्याउने, कमजोर र निष्तेज पार्ने अनि यो व्यवस्था नै कोल्याप्स गराउने षड्यन्त्र अन्तर्गत यो घटना घटाइएको त
दैनिक जसो बलात्कारका घटना भइरहने र दोषी पक्राउ नपर्ने अनि घटनाको अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी पाएको प्रहरी अधिकारीलाई आफ्ना छोरी चेली पनि असुरक्षित छन् भन्ने भय हुनुले सर्वसाधारणले के आशा गर्ने? कतै अहिलेको व्यवस्थालाई नै असफल बनाउन राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सरकार र सरकारका अंगभन्दा शक्तिशाली कुनै अदृष्य शक्तिले कतै षड्यन्त्र गरिरहेको त छैन? भन्ने आशंका जन्मिएको छ। यदि त्यसो हो भने भर्खरै दुई पार्टी एक भएर गठन भएको नेकपा र ऐतिहासिक र सशक्त मासबेस नेपाली कांग्रेस दुईवटै शक्ति कमजोर, अनुशासनहीन, विधिको शासनबाट बाहिर र केही गर्न नसक्ने र असंगठित बनाउने र राज्य हाँक्ने कुनै शक्ति बाँकी नराख्ने र जनता र राष्ट्रभन्दा टाढाबाट मुलुक र जनताको पहुँचभन्दा टाढाबाट नयाँ शक्ति उत्पन्न हुने खतरा पनि हुन सक्ने भन्दै विज्ञहरुले चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्।
अर्कोतर्फ सुरक्षा निकायमाथि पनि उनीहरुको कामकारवाही र दक्षतामाथि आम जनमानसबाट उठ्ने गरेको प्रश्न र लाग्ने गरेको आरोप अनि न्यायपालिकाले गर्ने काम कारवाहीमाथि पनि आम जनताले प्रश्न उठाउन थालेका छन्। यसरी राज्यका सबै अंग कमजोर हुने र जनताको भरोसा पनि नरहने अहिलेको अवस्था कायमै रह्यो भने मुलुकको भविष्य के होला ? मुलुकै नरहे हामी कहाँ रहौंला ? मुलुकको अवस्था जति बिग्रँदै गएको छ त्यसले उठाउने प्रश्नहरु पनि निकै गम्भीर बन्दैछन् ।
मुलुक बिगार्ने वा बनाउने यही राज्यका संचालकहरुले हो । मुलुक हाँक्ने राजनीतिले नै हो। आज मुलुक हाँकिरहेको शक्तिलाई जनताले पछिल्लो निर्वाचनमा यो जिम्मेवारी दिएका हुन् । अहिलेको प्रतिपक्षलाई पनि जनताले विगतमा यो जिम्मेवारी दिएका थिए। पहिले जिम्मेवारी दिएको राजनैतिक शक्तिबाट मुलुकको संचालन ठिक तरिकाले नभएको भन्दै जनताले नयाँ शक्तिलाई अवसर दिएका हुन्। तर, नयाँ शक्ति पुरानोभन्दा झनै कमजोर देखिने अवस्था कसरी आयो। जुनसुकै बेला ढल्न सक्ने खतरामा रहेको पुरानो गठबन्धन सरकारले जति पनि उपलब्धी अहिलेको दुई तिहाइको सरकारले किन देखाउन सकेन?
दुई पार्टी एक भएर गठन भएको नेकपा र ऐतिहासिक र सशक्त मासबेस नेपाली कांग्रेस दुईवटै शक्ति कमजोर, अनुशासनहीन, विधिको शासनबाट बाहिर र केही गर्न नसक्ने र असंगठित बनाउने र राज्य हाँक्ने कुनै शक्ति बाँकी नराख्ने र जनता र राष्ट्रभन्दा टाढाबाट मुलुक र जनताको पहुँचभन्दा टाढाबाट नयाँ शक्ति उत्पन्न हुने खतरा
शक्तिशाली हुँदाहुँदै पनि निरीह देखिएको अहिलेको सरकारले आत्मसमीक्षा गर्नै पर्छ। अघिल्लो पटक गठबन्धन सरकारमा ९ महिना प्रधानमन्त्री हुँदा प्रधानमन्त्रीले जुन वाहवाही पाएका थिए अहिलेको सरकार गठन भएको पनि लगभग त्यति नै समय हुँदा किन जनताको गाली खाने अवस्थामा पुगे ? यसको गम्भीर समीक्षा हुनै पर्छ ।
नेकपाले बुट्टनुपर्छ जनताले अहिले दिएको अवसरको सदुपयोग गर्न नसके अर्कोपटक उनै जनताले गलहत्याउनेछन् । अर्कोतर्फ मुलुकमा सरकारले जनअपेक्षाअनुरुप काम नगरेको देख्दादेख्दै त्यसको खबरदारी गर्ने प्रतिपक्ष कहाँ बेपत्ता छ ? विगतमा देशका ठूला ठूला परिवर्तनमा नेतृत्व गरेको कांग्रेसले कानमा तेल हालेर बस्न सुहाउँछ ? कांग्रेसभित्र विगतका ठूला परिवर्तनमा नेतृत्व गरेका अधिकांश नेता बाँकी छैनन् ।
के त्यही पार्टीको अहिलेको नेतृत्वले त्यस्तै जिम्मेवारी लिन सक्दैन ? यो कांग्रेसका लागि पनि अवसर हो । कांग्रेस नेतृत्वका लागि पनि बीपी, गणेशमान, कृष्णप्रसाद वा गिरिजाप्रसादजस्तै बन्ने मौका हो । कम्युनिष्टले पुष्पलाल र कांग्रेसले बीपीको नाम जपेर मात्र हुँदैन उनीहरुजस्तै बन्न सक्नुपर्छ ।